गण्डकीमा कांग्रेसको अक्षम्य भूल, दलित समुदायप्रतिको अपमान : कोइराला- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
गण्डकीमा कांग्रेसको अक्षम्य भूल, दलित समुदायप्रतिको अपमान : कोइराला
‘बीपी स्मृति दिवस मनाउँदै र बीपीको तस्बिरमा चढाएको फूल नओइलिँदै गर्दा भएको यो निर्णयको जवाफ हामीले समाजलाई दिनैपर्छ । यसलाई तुरुन्त सच्याउनु जरुरी छ ।’
श्रावण १०, २०७८ दीपक परियार
पोखरा — कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने क्रममा कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री नबनाइनु पार्टीले गरेको अक्षम्य भूल भएको बताएका छन् । उनले दलित समुदायको प्रतिनिधित्त्वलाई लत्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण र दलित समुदायप्रतिको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बिस्तारका क्रममा अन्तिम समयमा विश्वकर्माको नाम काटेर पोखराका व्यवसायी विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको थियो ।
सामाजिक कुरीतिकाविरुद्ध व्यवहारिक रुपमा लडेको नेपाली कांग्रेसलाई गण्डकी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रियाले दुःखित बनाएको नेता कोइरालाले बताएका छन् । ‘सिंगो दलित समुदाय जसले लोकतन्त्र स्थापना र पार्टी संगठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले उनीहरुको शिर निहुरिएको छ,’ आइतबार उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘भोलि कुन मुखले उनीहरुको अगाडि जाने ? यो हेक्का राख्नु पर्दैन ? कि एकपटक सरकारमा गएपछि सधैंलाई पुग्यो ?’
सामाजिक न्यायका कुरा केवल इतिहासको बखान र शब्द रटान मात्रै नभइ व्यवहार र लोकतान्त्रिक आचरण पनि भएको टिप्पणी उनले गरेका छन् । उनले लेखेका छन्– ‘बीपी स्मृति दिवस मनाउँदै र बीपीको तस्बिरमा चढाएको फूल नओइलिँदै गर्दा भएको यो निर्णयको जवाफ हामीले समाजलाई दिनैपर्छ । यसलाई तुरुन्त सच्याउनु जरुरी छ ।’
आगामी दिनमा यस्ता निर्णयहरु पार्टीको निम्ति निकै महँगो पर्न सक्ने भएकोले हेक्का राख्न समेत उनले अनुरोध गरेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ १५:२९